Paris 3 maalmood gudahood: waxa la arko iyo waxa la sameeyo | Safarka Absolut
Paris 3 maalmood gudahood: waxa la arko iyo waxa la sameeyo
Lugaha Alberto | | Francia, Paris
Caasimadda Faransiiska waxay sii ahaaneysaa mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee Yurub laga tago iyadoo ay ugu wacan tahay dhaxalkeeda badan iyo jawi u gaar ah. Jidadka waxaa gilgilay dhawaqa qalabka loo yaqaan 'accordion, the Eiffel Tower dhalaalaya badhtanka Champs de Mars ama buur ka mid ah Montmartre taasi waxay sii socotaa inay kiciso bohemia waqti kale waa qaar ka mid ah soojiidashada weyn ee magaalada jacaylka ee aan ku darno soo koobida soo socota ee ku saabsan waxa la arko iyo waxa lagu sameeyo magaalada Paris 3 maalmood gudahood.
1 Maalinta 1: laga bilaabo Notre Dame ilaa Eiffel Tower
2 Maalinta 2: booqashada Montmarte
3 Maalinta 3: Versailles
Maalinta 1: laga bilaabo Notre Dame ilaa Eiffel Tower
Intii lagu gudajiray sanadihii aan kunoolaa magaalada Paris, marinka maalinka koowaad wuxuu noqday saaxiibkeyga ugu fiican marka ay timaado hagida dalxiisayaasha iyo asxaabta inta badan imaan jirtay caasimada Faransiiska. In kasta oo ay wax yar sii dheeraan karto, waxay ka kooban tahay soojiidashada waaweyn ee magaalada oo had iyo jeer waxay siisaa meelo aad ku dhex milmi karto waqti kale oo maalin ama safar ah.
Jidka Paris 3 maalmood gudahood Wuxuu bilaabmayaa Notre Dame, on l'Île de la Cité, kaniisada quruxda badan ee Gothic-ka ee dhiirrigelisay Victor Hugo iyo dabeecadda caanka ah ee Quasimodo ee The Hunchback ee Notre Dame. Meel qurux badan oo aad ku raaxeysan karto naftaada adoo ku wareegaya aagga ama galaya cathedral lafteeda.
Jagada mudnaanta leh ee kuu oggolaan doonta inaad ku milicsato Wabiga Seine, meesha caanka ah bateaux-mouche waxay ka gudbaan biyaha ama meelaha sida kuwa oo kale ah Jardin du Vert Galan, Beer ku taal dhamaadka jasiiradda oo noqota meesha ugu habboon ee tamashlaha. Haddii aad horay u sii socoto, sidoo kale waad ku milicsan kartaa Pont des Arts ama Pont Neuf, laba ka mid ah buundooyinka ku fidsan webiga. Ugu dambeyntiina, ka dib qiyaastii toban daqiiqo oo socod ah, waxaad la kulmi doontaa Matxafka Louvre, oo laga yaabo inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan Yurub oo u baahan booqasho qoto dheer oo aad ugu deeqi karto maanta ama mid kale.
Louvre wuxuu ka horreeyaa wax cajiib ah Beerta Tuileries oo ay ka buuxaan farshaxanno iyo deyrar xiiso leh, marka lagu daro joogitaanka laba madxaf oo kale sida Orsay, oo aan ugu jeclahay oo aan diiradda saaray Impressionism, ama L'Orangerie, oo sidoo kale ah 'Impressionist', oo ku yaal meel dahabi ah oo qurux badan Place de la Concorde, halkaas oo caan ku ah Obelisk of Luxor iyo Isha Biyaha Badaha waxay calaamad u tahay bilowga astaan ​​kale oo weyn oo magaalada ah: the Champs Elysees!
Adoo maraya wadiiqadan sheekooyinka ah, waxaad ka fikiri kartaa bilicdii Paris iyo xitaa waxaad ka baari kartaa dukaamo badan oo ku soo xoomay qaybtan u horseedaysa Qaadashada Guusha. Wadnaha isgoyska sideed waddo, qaanso caan ah oo uu wakiishay Napoleon Bonaparte waxaa ka mid ah aragti gudaha ah oo looga fiirsanayo guud ahaan muuqaalka 'Champs-Elysees' iyo 'Jardin des Tuileries'.
Ugu dambeyntiina, adoo maraya l'Avenue Kléber, waxaad ku gaari doontaa Trocadero, oo ah barxadda ugu fiican ee aad ka fekereyso taallada ugu caansan magaalada: Tower Eiffel oo ka dhalaalaya badhtanka Champs de Mars oo kicisa in laga ogaado kor. Markaad halkaa gaarto, waxaad ku qaadan kartaa dalxiis cagtiisa taalada ama waxaad aadi kartaa xaafadda quruxda badan ee Saint Germain si aad u cabto.
Maalinta 2: booqashada Montmarte
Halkaas, masaafada dheer, buur ayaa laga daawadaa magaalada Paris oo dhan iyadoo sugaysa in la ogaado. Muuqaalka beeraha canabka ah, qasacade iyo farshaxanada reer Bohemian sida Toulousse Lautrec ama Pablo Picasso laftiisa, Montmartre Hill waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan magaalada. Astaan ​​aad ku dhex quusayso adiga oo ka bilaabaya istaagga metro Blanche, ee ku taal Boulevard de Clichy.
Meel ugu horreysa oo aad ka hor ogaan doontid khuraafaadka Moulin Rouge, oo albaabkiisa ay ka muuqdaan muusigyada kala duwan ee bandhiga iyo in, gaar ahaan fiidkii, nalalka noo qaadaya filimka caanka ah ee ay jilayaan Nicole Kidman iyo Ewan McGregor. Waana in shineemadu ay aad ugujirto qaybtaan koowaad, maadaama dhowr mitir ujirto waad awoodi doontaa inaad soo ogaato Café des Deux Moulins wuxuu ku dhintay filimka Amélie iyo halka cirridka caanka ah ama cayayaanka filimku wali ka muuqdo.
Halkan laga bilaabo, jidadka ayaa isku dhex mara waddooyinka farshaxanka magaalooyinka, meelaha soo jiidashada leh sida Bateau Lavoir, dhismihii ay Picasso mar ku noolayd, ama milkiilaha kale ee Montmartre: Moulin de la Galette, oo lagu ilaaliyo irrid koronto leh oo lagu daydo nuqul aad ku cuni karto ama ku cabbi karto khamri qaar. Haddii aad sii waddo koritaanka jaranjarooyinka, waxaad sidoo kale ogaan kartaa meelaha kale ee caanka ah ee Montmartre sida La Maison Rose ama waxaad booqan kartaa beero canab ah oo magaalooyin ah halkaasoo dabaaldegga goosashada lagu xuso Oktoobar kasta. Isbarbardhigyada mararka qaarkood u horseedaya cajiibka Place du Tertre, xudunta fanka beri hore iyo tan maanta, inkasta oo uu u gacan galay dalxiis, haddana waxay noqotay goob soo jiidasho leh.
Sawir qaade: Daniela Linssen
Ugu dambayntii, oo aad jilayso "ugu dambayn" maalinteenna ugu horreysa, waad gaari doontaa muqadas muqadas ah, Basilica-kii caanka ahaa ee la dhisay qarnigii XNUMX-aad ee xukuma dusha sare ee Butte de Montmartre. Waxaa lagu duuduubay soo jiidasho gaar ah, basilica waxay noqoneysaa goobta ugu fiican ee lagu haysto biir jaranjaradiisa halka qof uu garaacayo gitaarka aragtidiisana lagu lumiyay muuqaalka dusha sare ee magaalada.
Maalinta 3: Versailles
Paris waa magaalo ay ka buuxaan meelo badan oo la booqdo, labadaba magaalooyinkeeda iyo hareeraheeda. Tan iyo markii Disneyland Paris oo ku taal magaalada dhiirrigelisay Monet, Giverny, fursadaha waa badan yihiin. Laakiin kiiskeenna, waxaan dooran doonnaa mid ka mid ah meelaha ugu caansan: kuwa aad Palace of Versailles, oo ku taal meel 15 kiiloomitir u jirta Paris oo laga heli karo khadka C ee tareenka RER oo joogsada Versailles Rive Gauche.
Waxaa dhameystiray Louis XIV, oo ah boqortooyo soojiidasho leh oo maxkamada ka dhistay halkan 1682, Versailles waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato gabal ka mid ah taariikhda Faransiiska adiga oo ka jaraya laxanka magaalada. Dhismo ka kooban aagag sida quraafaad u weyn sida kaniisaddeeda weyn, guryaha boqortooyada ama, gaar ahaan, Hoolka Muraayadaha, Halka ay ka iftiimaan waxay ka dhigayaan 373 muraayad oo lagu duubay qaab dhismeed aad u wanaagsan.
Booqasho sii socota iyada oo loo marayo Jardiinooyinka Versailles, oo ku faafay in ka badan 800 hektar oo ili sharaf leh, taallooyin ama xayndaabyo asymmetrical ah oo ka kooban Eden boqortooyo ah oo ay ka buuxaan waxyaabo la yaab leh.
Iyadoo halkaa Qasriga Versailles Waa la booqan karaa wakhti kasta oo sannadka ka mid ah, waxaa ugu wanaagsan in tikidhada horay loo sii helo si looga fogaado safafka badan ee ka baxa hareeraha.
Sidan, intii lagu guda jiray socdaalkeenii Paris 3 maalmood gudahood Waxaan ogaan doonnaa muuqaalada weyn ee magaalada jacaylka sidaa darteed, xilliyadaada bilaashka ah, waxaad go'aansan kartaa inaad sahamiso meel cayiman ama aad u dhawaato kuwa kale oo badan oo xiisaynaya sida, tusaale ahaan, Quartarka Latin-ka ee mashquulka badan Seine), Qasriga Invalides (ka dib kii hore) ama Jardiinooyinka Luxembourg.
Waxaad jeclaan lahayd inaad aragto Paris 3 maalmood gudahood?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Paris 3 maalmood gudahood: waxa la arko iyo waxa la sameeyo
Sierra de Huelva: Tuulooyinka ugu quruxda badan